बीबीसी मास्टर सेफमा उपाधि नजिते पनि सन्तोषले सबैको मन जिते- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बीबीसी मास्टर सेफमा उपाधि नजिते पनि सन्तोषले सबैको मन जिते
पुस ३, २०७७ नवीन पोखरेल
लन्डन — विश्व प्रतिष्ठित पाककलासम्बन्धी प्रतियोगिता ‘मास्टर सेफ: द प्रोफेसनल्स् २०२०’ को टप थ्रीमा पुगेका सन्तोष साह उपाधिबाट विमुख भएका छन् । बिहीबार बेलुका बीबीसी वानमा प्रसारित ग्रान्ड फिनालेमा उनको मास्टर सेफ च्याम्पियन बन्ने सपना अधुरै रह्यो । उपाधि बेलायती सेफ आलेक्स वेवले जिते ।
तर, ३२ जना व्यावसायिक सेफबीच शुरु भएको उक्त प्रतियोगितामा टप थ्री पर्नुलाई पनि उनले ठूलो उपलब्धि मानेका छन् । विश्वसामु नेपाली खाना चिनाउन र लाखौं नेपालीको मन जित्न सफल भएकाले उपाधिभन्दा त्यो महत्वपूर्ण भएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
‘एकदम कडा प्रतिस्पर्धा थियो । मेरो उपाधिमात्र जित्ने उद्देश्य भएको भए २० वर्ष बढी अनुभव रहेको इन्डियन खाना बनाउँथे होला तर त्यसो गर्न मनले नै दिएन,’ साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘म आफ्नो स्वाभिमान कहिल्यै बेच्दिनँ । भारतीय खाना बनाएर उपाधि जितेको भए म कुन मुखले नेपाल जाने ?’
करिब ५ सातादेखि चलेको तीव्र प्रतिस्पर्धामा सन्तोषले नेपाली परिकारमात्र पस्किएर आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाए । हिमाल, पहाड र तराईको खाना र नेपाली भेषभूषा एवं संस्कृति विश्वसामु चिनाए । नेपाली झण्डा फहराए । भादगाउँले र ढाका टोपी पहिरिए ।
आमाप्रति समर्पित खानाले बीबीसी मास्टर सेफको टप ३ मा सन्तोष
बिहीबारको फाइनल एपिसोडमा नेपाली ढाका टोपीमा सजिएका थिए सन्तोष । त्यसअवसरमा उनीबारे बीबीसीले तयार पारेको एक भिडियो सामग्री देखाइएको थियो जसमा सन्तोषले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गरे । उक्त अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली खाना लिएर जाने सन्तोष एकमात्र नेपाली हुन् ।
ग्रान्ड फिनालेमा भैंसीको मासु, खोलेको साग, भेडाको गिदी आदि पकाएर चरेसको थालमा पस्किएका साहले यसअघि जिम्बु मोलेको पोलेको खसीको मासु, रायोको साग, पुदिना परौठा, साँधेको भटमास, पुरी, गंगटाको करी, कोदोको खिर, आंपको कुल्फी, तराईमा प्रचलित आंपको ‘अमोट’, नेपालको हिमाली भेगमा प्रचलित काँक्रोको भुटेको बियाँ, वन तरुल, कटहरको भुटेको बियाँ, प्याजको अचार, स्याउको चट्नी जस्ता परिकार चखाएर निर्णायकको मन जितेका थिए ।
त्यसैगरी, पोलेको भेडाको मासु, मासुको झोल, सिस्नु र आलुको तरकारी, बेथेको साग, भाङको चट्नी, मकैको रोटी, तामाको अचार जस्ता दर्जनौं नेपाली मौलिक खाना पस्किएर उनले नेपालमै त्यति वास्ता नगरिने खाना विश्वभर चिनाए । उनले करुवामा ऐला पिलाए । निर्णायकहरु सन्तोषको खानामा प्रयोग भएका मसला, सजावट र
सिर्जनशीलता देखेर दंग पर्थे । उनले कुनै पनि प्रसंग नेपालसँग जोडिहाल्थे । नेपाली हुनुमा गर्व गर्थे ।
बीबीसी वानमा शो प्रसारण भएर विभिन्न चरण पार गर्दै अगाडि बढेपछि सन्तोषका फ्यान लाखौं भए । नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटदेखि नेता डा. बाबुराम भट्टराई, अर्बपति विनोद चौधरी, बैंकर अनिलकेशरी शाह, क्रिकेटर पारस खड्का, कीर्तिमानी स्विमर गौरिका सिंह, चर्चित फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ, कलाकारलगायत हरेक क्षेत्रका दिग्गजले उनलाई शुभकामना पठाए । बीबीसीसहित बेलायत र नेपालका कैयौं मिडियाले उनको ‘कभरेज’ गरे ।
योमरी चखाएर बीबीसी मास्टर सेफको फाइनल पुगे सन्तोष
रातारात सेलिब्रेटी भएका सिरहा कर्जन्हाका सन्तोषलाई अहिले कस्तो अनुभव भएको छ ? ‘अप्रत्यासित माया र सद्भाव पाएँ । तर म भान्से बनेरै बस्न चाहन्छु । महिनादिन अघि जस्तो थिएं, त्यस्तै सामान्य मानिस भएर रहनेछु । केवल अहिले जस्तै सबैको माया पाइरांखूँ,’ उनको अपेक्षा छ ।
अहिलेसम्म अविवाहित ३५ वर्षीय सन्तोषको छिट्टै बिहे भएको हेर्ने चाहना उनकी आमाको पनि छ । उनीचाहिँ कहिले गर्ने सोचमा छन् ? ‘त्यो त समय र भाग्यले बताउला । समय आएपछि गर्छु,’ उनले सुनाए ।
मास्टर सेफ फाइनलिष्ट सन्तोषले अब सेन्ट्रल लन्डनमा ‘ऐला बाइ सन्तोष’ नामक टिपिकल नेपाली कुजिन रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको तयारीमा छन् । भविष्यमा पहिलो नेपाली मिसिलिन स्टार सेफ बन्ने उनको सपना पनि छ ।
प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०६:२२
ओली र दाहालबीच फेरि चर्काचर्की
पुस २, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्ककमल दाहालबीच चर्काचर्की भएको छ । बिहीबार साँझ पाँच बजे परिषद् बैठक आव्हान गरेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए ।
साढे तीन बजे बालुवाटार पुगेका दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच परिषद् बैठक स्थगन गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादबारे अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका नेताहरुलाई समेत जानकारी गराएका छन् ।
स्रोतका अनुसार छलफलको सुरुमै दाहालले स्थायी कमिटीबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यसको अवज्ञा गरेर परिषद् बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
दाहालले सचिवालयका अन्य सदस्यहरुलाई भनेका छन्, ‘परिषद् बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाएँ । पार्टी निर्णयको अवज्ञा भयो, परिषद् बैठक बोलाएर पार्टीले अर्को निर्णय लिन सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ ।’स्रोतका अनुसार दाहालको यस्तो भनाइपछि ओलीले मंगलबारकै निरन्तरताका रुपमा बैठक बोलाइएको र यसमा कुनै ठोस निर्णय नहुने बताएका थिए । ‘बैठक खास निर्णय गर्न पनि होइन, यो अस्ति (मंगलबार) कै बैठकको निरन्तरताका रुपमा मात्रै हो,’ दाहालसँग ओलीको भनाई थियो ।
तर, बैठक कुनै पनि हालतमा स्थगित हुनुपर्ने नभए यसबाट उत्पन्न समस्याका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री आफै हुनुपर्ने दाहालको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगनको निर्णय लिएका थिए ।
दाहालले सचिवालय सदस्यहरुलाई बताएअनुसार छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिवलाई फोन गरेर परिषद् सदस्यहरुलाई बैठक स्थगनको सूचना दिन भनेका थिए । त्यसैअनुसार चार बजे अगाडि नै परिषद् सदस्यलाई बैठक स्थगनको सूचना दिइएको थियो ।
अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच विवाद भएको थियो । पार्टी निर्णयअनुसार अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने र यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने दाहालको अडान थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको समेत चासो रहेकाले छलफल गरेर केही दिनमा अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासन दिएका छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश फिर्ताको एजेन्डा भने थिएन ।
मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा गएपछि दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह निकट सांसद संसदको विशेष अधिवेशन मागको निवेदन लिएर बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । एकातिर बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक अर्कोतिर संसद अधिवेशन मागको निवेदनले दवावमा परेका प्रधानमन्त्री ओली अन्तत: अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए । अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएपछि संसद अधिवेशनको मागको निवेदन पनि फिर्ता भएको थियो । केही नेताको मध्यस्ततामा ओली र दाहालबीच अध्योदश फिर्ता र निवेदन फिर्ताको सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई स्थायी कमिटी बैठकबाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित : पुस २, २०७७ २२:०३